Shina Ladies kitapo faribolana lehibe fatratra double zipper klac poketra vavy fonosana vita amin'ny kitapo roa fonosana fonosana fonosana Factory sy mpamatsy | Sansan
Style Eoropa sy Amerika
Singa malaza embossing
hamafin'ny antonony ho malefaka
Ny kalitao polyester
Color volomparasy, manga, mainty, mavokely, akondro, mena mena
Ny lanjan'ny vokatra 0.2kg
Haben'ny vokatra 19.5 * 9.5 * 4cm
Mirefy 7.6 santimetatra x 3.7 santimetatra x 1,5 santimetatra (eo ho eo amin'ny 19.5 cm x 9.5 cm x 4 cm) ary milanja 200 grama.
Natao hitana karatra banky 8, misy toerana 4 ahafahana mitahiry goavam-bola be, zipeta 1 amin'ny fitehirizana saran-dàlana lehibe, 2 takona miafina ary efam-pahefana avo roa heny amin'ny fanokafana sy fanidiana. Ny efitrano malalaka dia afaka mitazona ny carte de crédit, volavolan-dalàna, faktiora, finday ary zavatra hafa kely. Tsy be korontana intsony ny fitahirizana. Ny fehin-tànana azo esorina, ny fampiasana betsaka, azo ampifanarahana amin'ny sitrapo, azo antoka ary azo ampiharina. Qatar metaly avo lenta miaraka amin'ny loha vy zipper matevina, mamirapiratra sy madio, malama sy tsy matevina, mateza.
Ity modely lychee modely mavokely ity dia kitapo marika roa-marika tsara indrindra ho an'ny raharaham-barotra sy fialam-boly, ary koa ny safidy tsara indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny namana.
Teny fanalahidy: kitapom-batsy vehivavy, faritra lava, zipeta avo roa heny
Previous: Vehivavy kitapo fonosana be dia be karazana karazana 2020 vaovao kitapo finday fonosana Koreana vaovao
Manaraka: Kitapo vehivavy kitapo mamirapiratra kitapo lava be mifanitsy loko loko kitapo poketra
Sambo lava salohim-pifandraisana lavitra ...
Dobera maoderina mora tarehy lehilahy
Kitapom-bolam-bavam-paty tsy mifangaro amin'ny rano madio ...
Mivory kitapo marika miendrika tariby manjelatra vaovao ...